Ukuqonda iMigodlo yeGalofu (ukuhamba, iGap, Sand, Lob)
Ukuqonda iiklabhu zakho zegalufu: Ziziphi iidali?
I-Wedges yilebhu ephakamileyo kakhulu kwiiklabhu zegalufu, ezenzelwe ukukhawuleza kwendlela yokuhamba (kwiindawo ezininzi zegalufa, iiyari eziyi-120 kunye), izibetho zidlalwa entlabathi, izikhwama ze-chip kunye ne- pitch shots , kwaye ngokuqhelekileyo nayiphina ikhunta apho i-golfer ufuna ibhola likhuphuke lihlawule ngokukhawuleza.
I-Wedges nazo zineentsimbi, kodwa abagadi begalufu bacinga ngemigqomo njengecandelo elincinci leentsimbi, okanye njengezandi ezikhethekileyo. Bavame ukucingwa njengeqela labo leeklabhu zegalufu, ngamanye amagama.
Ukususela kuma-1930 ukuya phambili, kwada kwada kwinqanaba lokugqibela le-20 leminyaka, kwakuqhelekile ukuba i-golfers efanelekileyo kakhulu ithwale iimbumba ezimbini kuphela:
Ukugqithisa i-wedge: I-low-lofted of wedges (leyo ibetha ibhola ngokugqithiseleyo), i-wedging wedges (isicatshulwa i-PW) idla ngokubandakanya kwisethi yeetoni. I-PW ithathwa njengenye yeeklabhu ezisisiseko zonke iifolthi ezithwalayo.
Umkhonto weNtshonalanga: Uqulunqwe ngokukodwa ukwenza ukukhwabanisa kwi-bunkers kulula. Ezifingqiweyo SW.
Ngasekupheleni kwekhulu lama-20, njengokuba ingcali eyongezelelekileyo ingenise igalufu, iinkampani zegalufu zaqala ukwenza i-wedges eyongezelelweyo. Namhlanje, ezinye iimbini ezimbini eziqhelekileyo zi:
I-Gap wedge: Ebizwa ngoko ngokuba iwela phakathi kwe-pitge kunye ne-sandge wedge kwi-loft. Umgca wecala unendawo ephezulu ngaphezu kwe-PW, i-loft encane kune-SW.
Lob wedge: Ngokuqhelekileyo iqela eliphakamileyo eliphezulu liza kuthwala i-golfer, i-lob wedge idala indawo ephakamileyo yokukhuphuka kunye nenyuka, ngenxa yamashishini afanele avuke ngokukhawuleza (mhlawumbi, umzekelo, ukufumana umthi).
I-gap wedge, i-sand wedge ne-lob wedge ihlala ithengiswa ngokwahlukileyo, okanye, ngamanye amaxesha, njenge-sub-set-sub-setting; akuqhelekanga ukuba zifakwe kwisiseko esisiseko seentsimbi.
Ngenxa yokuba ugxininiso lwamabhanti luchanekile - ukuzama ukutshulwa kwidrafthi emfutshane ngokukhawuleza kwi- flagstick - ii-wedges zibizwa ngokuba yi "club clubs".
Ziziphi iiMatriki Ngaba abaQaleli bafuna?
Njengomqali, awudingi ukuba uzikhathaze kakhulu ngamadaka ngaphandle kwe-wedge wedge. I-Gap wedges kunye ne-lob wedges ziqhelekile kwiingxowa zabadlali ababhetele, kwaye i-sandage wedges iqhelekile kubo bonke abadlali. Kodwa abaqalayo akufanele bazive benyanzelekile ukuba bathathe isanti eselunxwemeni. Ezi ziinkampani ezikhethekileyo ezizisebenzisayo, khumbula, kwaye uya kufuna ukufunda indlela yokusebenzisa iiklabhu ezingundoqo kuqala.
I-Wedges ifaka i-shafts e mfutshane kunye neengcingo eziphezulu kakhulu kwiiklabhu zegalufu. Enyanisweni, ii-wedge zihlala zichongwa ngeloft yabo kunegama labo. I- lobbed wedge mhlawumbi ingabizwa ngokuba ngu-"degree-60 degree", umzekelo.
Amadaka e-Sandle ayenziwe (ngokuqhelekileyo anikezelwa kwi- Gene Sarazen ) ukwenza ukukhwa kwe- sand bunkers kulula. Ngokuqhelekileyo, i-sandge wedges ibininzi ukusuka kuma-52 kuya kuma-56 degrees.
Njengoko izakhiwo ziye zinciphisa ngaphezu kwexesha (umz., Insimbi yesi-5 namhlanje ingahle ifakwe kuma-degrees angama-26, kanti iminyaka engama-30 edlulileyo i-iron-5 yayiza kukhishwa kwi-degrees ezingama-32), uye wathandwa kakhulu ukuba athathe imida engaphezulu.
I-typical lob wedge ingaba ne-degrees e-60 ukuya kuma-64 degrees. Njengoko igama layo lithetha, i-lob wedge ivumela umdlali ukuba "athabathe" ibhola phezulu emoyeni, ukusuka apho iya kuhlahla ngokukhawuleza phezu kokuluhlaza, ungenanto encinane okanye ayikho.
Xa i-wedge ihamba ngokuqhelekileyo isuka kwi-42 kuya kuma-46 degrees, i-wedge yedgeyithi ibizwa ngokuba ivala "i-gap" kwindawo ephakathi kwe-pitge kunye ne-sandge wedge. Umgca wegap oqhelekileyo unokususwa kwi-48 ukuya kuma-54 degrees. Umdaka wecala uhamba kunye namagama A-wedge, ukuhlaselwa kwebala kunye nendlela yokuhamba.
(Kwii-2000s zakuqala, i-fifth-wedge - edlalwa ngokuba yi-X-wedge-yaqala ukubonakalisa kwiingxowa zabasebenzi bezandla ezisezantsi. I-X-wedges inezona ndawo eziphezulu kakhulu, zonke ii-degrees ezingama-64 ukuya kuma-70. iinqanaba zobungcali, kwaye kwaninzi inzuzo ayithwali.)
Zonke iintsimbi, kuquka i-wedges, zibonisa ipropati eyaziwa ngokuba yi-" angle bounce ", ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuthi "bounce." I-Bounce yipropati yomzimba yedwa yecala legalufa. Kwaye ukuxhamla ingcamango yokuba nabadlali begalufu abaye badlala iminyaka emininzi abanakuqonda, okanye bangayiqondi.
Ngoko akukho oqalayo kufuneka akhathazeke kakhulu xa eva abanye abagaluli bexoxa nge "bounce" kwaye abanalo inqaku oko kuthetha. Awunyanzelwanga ukuba kweli nqaku.
Ngoko ingcaciso emfutshane: Isixa sokuqhayisa i-wedge sinokwenza ukuba iqela lingenakuxhatshazwa ukumba kwi-turf xa iqela lihlasela umhlaba. Izimo ezahlukeneyo zegalufa, iintlobo ezahlukileyo zokusetyenziswa kwemida, iintlobo ezahlukeneyo zokuguquka kwegalufu zifuna ngaphezulu okanye ngaphantsi. Unokumba kwiinkcukacha, ukuba unqwenela, ekuhloliseni kwethu indima yokuxhamla kwimida .
Ukuba awuwathengi i-sandge wedge ngqo kwi-bat, uzakufuna ukusebenzisa i-wedging wedge yakho ye-sanding shots ejikelezayo.
Ixesha lokusebenzisa i-Wedge ye-Golf Shot
Ngokuphathelele ixesha elifanelekileyo lokusebenzisa ezinye iidgeji, oko kuya kuthi, ngokuqinisekileyo, kuya kuqwalaselwa ngokuyinhloko yardard yakho. Ngamahlumela apheleleyo ukusuka kwi-fairway, i-golfer eyindoda enokuqhathaniswa nayo inokuthi ingabetha isanti esingaba ngu-65-75 iiyadidi; bafazi, 45-60. I-lobge wedge yayiza kuba ngama-40 ukuya kuma-50 iiyadi amadoda, 25-40 kubafazi. I-gap wedge yayiza kuwela phakathi kwe-wedge kunye ne-sandge wedge yardards.
Yaye la maqela aya kuthi, xa ahlaselwe kakuhle, avelise uphezulu oluphezulu kakhulu. Ngoko ukuba ufuna ukuwela phezu komthi, umzekelo, umgca ufika ngokufanelekileyo. Okanye ukuba ungekho ohlaza okomdaka omkhulu phakathi kwakho kunye nefowuni, ukuphambuka okuphakamileyo, ukudubula kunye nenqabileyo kukukhetha okulungileyo. Ngenxa yokuba izikhwama zamadaka zineendlela eziphezulu, zivame ukuhamba ngokukhawuleza xa zithatha uhlaza. Abanye abadlali abaphumeleleyo banokuvelisa i- backspin eninzi kunye ne-wedge, ebangela ukuba ibhola libuyele (okanye "lilume") xa litshitshisa oluhlaza.
Naluphi na umgca ungasetyenziselwa ukuphahlaza uhlaza.
Njengomqali, qwalasela i-gap wedge kunye neek lob wedge ezikhethekileyo kwiiklabhu ukuya kwixesha elizayo kwi-golf career. Umtya wesanti unokuzikhethela kubaqalayo, kodwa mhlawumbi ube ngowokuqala "ongezelelweyo" owathengayo ukuba ube ngumlutha wegalufa.
Ngomnye umzekelo, uqeqesho olusisiseko kwiindlela ezifanelekileyo zokusebenzisa i-wedges yakho, jonga izinto ezilandelayo:
Ukumisa, sebenzisa indlela 7-8-9
Funda indlela ye-6-8-10 yokukhupha
Izitshixo ezintathu zokudlala ihlabathi lempande
Unokufumana amanqaku amanqaku amanqaku kunye namavidiyo kwiingcebiso zethu zokubambisa kwiiComps ezingcono, iiPaki kunye neSand Shots section. Yaye ubone kwakhona iipokethi zethu zokufundisa iiDVD ezilungileyo kwiimidlalo ezimfutshane kunye neencwadi ezilungileyo zokufundisa kumdlalo omfutshane .
I-Allegory yoMgodi ovela kwiRiphabhlikhi yasePlato
Ukushisa kweTheyibhile yoLungiselelo lweeMveliso eziqhelekileyo
IiNtsholongwane eziKhiye eziBalulekileyo ezisetyenziswa yiWindows
Iimpawu zoKhetho lokuBulungisa kweNkundla ePhakamileyo
Indlela yokusebenzisa iLizwi elincinane kwi-Itali